ရေးမိရေးရာ…ဘ၀ဆိုတာ Remembrance…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရေးမိရေးရာ…ဘ၀ဆိုတာ Remembrance….
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Mar 3, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 27 comments
ကျုပ်က သဂျီး…သဂျီးနဲ့ အားရပါးရခေါ်ပြောလာခဲ့သော
ကိုခိုင်(Kai) ဆိုသူ တည်ထောင်ထားခဲ့သော www.myanmargazette.net
ဆိုတဲ့ မန္တလေးဂေဇက် ၀က်ဆိုဒ်ကို
စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူကို ပြောပြပါဆိုရင်….ဂဇက်ရွာသား `အညာတမာ´ ပါ..
သူက ကျုပ်စက်ရုံက well experienced Production Manager ပါ…
အင်တာနက် မပြောနဲ့ ကွန်ပြူတာတောင် ကျွမ်းကျင်စွာမသုံးတတ်သေးပါဘူး…
`ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်လား´တဲ့…ထုံးစံအတိုင်း..အလုပ်ရချင်တော့..`ဟုတ်ကဲ့ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်´ပေါ့….တကယ်က ဖွင့်တတ်ပိတ်တတ်ရုံလောက်တတ်တာ…..
အဲဒီအလုပ် အင်တာဗြူး ပီးသွားတာနဲ့ ကျုပ် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး အပြေးဝယ်…
ကွန်ပြူတာကျွမ်းတဲ့ ကျုပ်ညီတော်မောင်ကို သူညနေရုံးဆင်းရင်အိမ်ကိုခေါ်ပြီးသင်ရတာပေါ့..
လက်နှိပ်စက်တောင် ဂျိုကျိုးနားရွက်ပဲ့ ဂဂျိုးဂဂျောင်…
(၈) နှစ်လောက် အစိုးရအရာရှိဘ၀နဲ့ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နေလာခဲ့ပြီး…
ငယ်ရီးစားကလည်း လင်ရ…အော်ကျုပ်ဘ၀ မထူးပါဘူးဆိုပြီး…
မြန်မြန်သေ အေးတာပဲကွာ ..လို့ တွေးပြီး…နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သေရည်သေရက်သောက်သုံး
ပြီး..ရတဲ့လစာ ၁၂၅၀ ကျပ်ထဲက လစဉ် ၈၀၀ ကျပ်မိဘအိမ်ကိုထောက်ပံ့ပြီး….
ကျုပ်ကတော့ ငတ်တစ်လှည့် ပြတ်တစ်လှည့်ပေါ့…ဒီလိုနေလာရာက…
ကျုပ်ညွှန်မှုးက ဖုန်းဆက်လို့တဲ့…ည၉ နာရီလောက် ရုံးစောင့်က ကျုပ်ကို
အရက်ဆိုင်ကလာခေါ်တယ်…ကျုပ်က ရုံးမှာပဲ အိမ်လို စားပွဲကိုအိပ်ရာလုပ်နေတာကိုး…
ကျုပ်ရုံးပြန်ခဲ့ပြီး ဖုန်းပြန်ခေါ်တော့…မနက် မှီရာကားနဲ့ ရန်ကုန်ပြန်ခဲ့ပြီး
ညွှန်မှုးက နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် သွားရမတဲ့…လုံးဝ ထင်မထားတဲ့ အလှည့်အပြောင်း ဇတ်ကွက်ပါပဲ…ဒီလိုနဲ့ပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ…
အဲဒီမှာတွေ့တော့တာပဲ…တခြားနိုင်ငံက လာတက်ကြတဲ့ သူတွေက ကျုပ်တို့လာစာမေးကြည့်ပြီး
တအံ့တသြနဲ့….သူတို့လစာတွေနဲ့ဆို မြင်းမိုတောင်နဲ့ ဆီးစေ့လောက်ဖြစ်နေတာကလား…
ဒါပေမဲ့ ပြန်လာတော့လည်း ဒုံရင်းပါပဲလေ…လစာလေးမလောက်မငနဲ့….
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်အထည်ချုပ်ကုမ်ပဏီတစ်ခုမှာ လစာကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်ရပါတယ်..ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအလုပ်ဝင်ခါစမှာလည်း..စာရိုက်ရင်လက်နှိပ်စက်ပါပဲ…
နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း ကွန်ပျူတာဆိုတာပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဋ္ဌာနတွေပဲကွန်ပျူတာသုံးကြပါတယ်……..
ဒါကြောင်မို့လည်း..အဲဒီကုမ်ပဏီမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ (၁၃) နှစ်တာအတွင်း
လုပ်ငန်းကလည်း ကောင်းလာလိုက်တာ…ကျုပ်ဆို တစ်နေ့ တစ်နေ့
အလုပ်သမားအသစ်တိုးချဲ့ခန့်ထားရေးကိစ္စ ကိုသာ အားစိုက်လုပ်နေရတယ်…
ပဲခူး စက်ရုံကနေ အင်းတကော်၊ အင်းတိုင်၊ လှည်းကူးအထိသွားပြီး ဖယ်ရီစီစဉ်ပေးပါမယ်
စက်ချုပ်ကျွမ်းကျင်ပြီးသူဆိုရင် စားရိတ်ငြိမ်း အဆောင်ပါထားပေးပါ့မယ်နဲ့
အတင်း ကျေးရွာတွေထိ ကွင်းဆင်း လူရှာ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရတာပေါ့…
ဒီလိုနဲ့ပဲ..ကျုပ်အလုပ်စ၀င်စဉ်က ၀န်ထမ်းအင်အား ၆၀၀ ကျော်ကျော်သာရှိခဲ့ရာက
၀န်ထမ်းအင်အား ၃၀၀၀ ကျော်နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ စက်ရုံကြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
ကျုပ်တို့လို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံက အလုပ်လက်မဲ့တွေအတွက်လည်း
နိုင်ငံတကာ..အထူးသဖြင့် အမေရိကနဲ့ ဥရောပ က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့
မှုတွေလုပ်လိုက်တော့ ဟိုပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် အဆိုတော်ကြီး ရုပ်သံမှာ ခဏခဏ ဆိုနေသလို
စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့တာ တို့မမှုပါ သယံဇာတတွေပေါတဲ့မြေ….လို့ မရှက်မကြောက်
ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲ…လက်တွေ့မှာ လုပ်သားအင်အား အများကြီးအပေါ်
အားထားလုပ်ကိုင်ရတဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကတော့ တော်တော်အထိနာခဲ့ပါတယ်..
အော်ဒါမရလို့ ပိတ်တဲ့စက်ရုံတွေပိတ်…ရှိတဲ့အော်ဒါလေးနဲ့ ၀န်ထမ်းအင်အားမမျှလို့
၀န်ထမ်းအင်အားလျှော့ချလိုချနဲ့ အတော်ကြီး ဘ၀ပျက်ခဲ့ကြရပါတယ်…
၀န်ထမ်း အင်အား သုံးထောင်ကျော်ရှိရာကနေ တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချလိုက်တာ
ကျုပ်အဲဒီအလုပ်က စွန့်ခွာလာတော့ ၀န်ထမ်း ၈၀၀ လောက်သာကျန်ပါတယ်……
၀န်ထမ်းအင်အား လျှော့ပီဆိုရင် ထုံးစံအတိုင်း အင်ဒါရိုက်လေဘာ ခေါ်တဲ့
ရုံးဝန်ထမ်းတွေက စတာပေါ့…ဥပမာ…ဋ္ဌာနတစ်ခုမှာ အရင်က မန်နေဂျာ၊ ဒုမန်နေဂျာ
ပီးတော့မှ အော့ဖစ်ဆာ ဆိုပြီးခန့်ထားခဲ့ရာမှာ… မန်နေဂျာတစ်ယောက်နဲ့ လုပ်နိုင်တယ်
ကျန်တာဖြုတ်…စာရေးဝန်ထမ်းဆိုလည်း…၃၀% လျှော့ ဆိုတော့…ကျုပ်နဲ့ ဆိုးတူကောင်းဖက်
အဆိုးဆုံးကတော့ အဲဒီ ဖြုတ်ထုပ် လုပ်ငန်းကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရတာပဲ….
အံကို တင်းတင်းကျိတ်လို့ ကျုပ်ရော်ကြေးပေးဖြုတ်ခဲ့ရတာ ၀န်ထမ်း နှစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိမယ်….
တစ်ကြိမ်တည်းဖြုတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့…၂ နှစ် အတွင်း တဖြည်းဖြည်း လုပ်ခဲ့ရတာ..
မန်နေဂျာလို၊ အော့ဖစ်ဆာလို လူတွေ အလုပ်ကရပ်စဲတော့…ရပ်စဲမဲ့နေ့မှ ရုပ်တစ်ရက်
ကျုပ်ရုံးခန်းခေါ်တွေ့ပြီး …လျှော်ကြေးလစာ စာအိပ်ပေး…သူ့စားပွဲကိုသွား..သူ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း
တွေ သိမ်းယူခိုင်း … ပြီးတော့ ချက်ချင်း ကားပေါ်တက်စေပြီး
ကျုပ်ကိုယ်တိုင် သူ့အိမ်လိုက်ပို့ရတာ…လုပ်ငန်းရှင်နိုင်ငံခြားသားတွေက လူတစ်ယောက်ကို
အလုပ်ဖြုတ်ရပြီဆိုရင်…အဲဒီဝန်ထမ်း ဒေါသဖြစ်ပြီး ကုမ်ပဏီ လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်အောင်
တစ်ခုခု လုပ်သွားမှာ သိပ်စိုးရိမ်တာကလား…အဲဒီလုပ်ငန်းတွေ ကျုပ်လုပ်ရင်း ကျိတ်ပြီး
စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကလွဲလို့ ကျုပ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ…`သူ့ဆန်စား ရဲမှ´
ဆို မဟုတ်လား….ကျုပ်လည်း စီးပွားရေးပျက်ကပ် အခြေအနေတွေသိတော့
ဒီအထိတော့ ဖြုတ်ခံလိုက်ရသူတွေအတွက် ခံစားရပေမဲ့ ..အော်..ငါအလုပ်တည်မြဲနေသေးလို့တော်ပါသေးရဲ့ ဆိုပြီး ဖြေသာနေခဲ့ပါသေးတယ်…
ဒါပေမဲ့ အလုပ်ရှင်သူဋ္ဌေးက ဒီမှာတင်မရပ်ပဲ…ကျန်နေသေးတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့
အခွင့်အရေးတွေပါ တစ်နေ့ တခြား လျှော့ချလာပြန်ပါတယ်….
ဥပမာ..ပေးနေကျ ဘောနတ်စ် မပေးတော့ဘူး…ရက်မှန်ဆုကြေးတွေမပေးတော့ဘူး
ဟုတ်တယ်လေ..သူ့မှာ အလုပ်အော်ဒါကနဲတော့ မကျေနပ်လည်းထွက်..ကရုမစိုက်ဘူးကွ
ကျုပ်ကာကွယ်ပေးလို့မရ..ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တောင် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးလာခဲ့တော့ …ဘာမှလုပ်မရတော့တဲ့အဆုံး…
ကောင်းနေတဲ့ လစာနဲ့ ရာထူးကို စွန့်လွှတ်ပြီး….
တော်ပြီကွာ..ဘယ်သူ့လက်အောက်မှာမှ ၀န်ထမ်းအလုပ် လုပ်မစားတော့ဘူး
ငါ့မိသားစုကို ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ရအောင် ပြုစုကျွေးမွေးမယ်…လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်
ကျုပ်ရဲ့ ချစ်သူဇနီးမယားအလှ `မီး´ ကလည်း
ကျုပ် အလုပ်ထွက်ပီး အိမ်ကိုရုပ်တရက်ပြန်လာတော့ …ကျုပ်အားတက်စရာ…ဒီလိုအားပေးတယ်
ကျုပ်လက်မလျှော့ပါဘူး…ကျုပ်မှာရှိနေတဲ့ `ဒ´နံပါတ် SEကား အစုတ်လေးကို တက်စီပြောင်း
ကျုပ်ဆိုတဲ့ ကြီးမိုက် မလယ်မ၀ယ်နဲ့ တက်စီသမား ဖြစ်ခဲ့ရပါရောလား…….
(တက်စီမောင်းခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲစာ အတွေ့အကြုံတွေ တစ်နေ့တော့ စာသီကုံးပါအုံးမယ်)
စရိတ်နှုတ်ပြီး တစ်နေ့ တစ်သောင်းခွဲကျန်၊ နှစ်သောင်းကျန်…အဆင်တော့ ပြေနေတာပဲ
လူကတော့ ပင်ပန်းသဗျို့..ရန်ကုန်မြို့လယ် မိုးလင်းမိုးချုပ်ကားမောင်းရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း
ဒါပေမဲ့…ကျုပ်ကိုသာ ဘာမှမပြောရဲကြပေမဲ့ ကျုပ်မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကတော့…
ကျုပ်မိန်းမကိုကျုပ်ချစ်တာတစ်ခုကတော့…ကျုပ်အခုလို နိမ့်ကျနေတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်ကိုပိုကရုစိုက်တာပဲ…သားနဲ့ သမီးလဲဒီလိုပါပဲ…..
ကျုပ်မိဘတွေက မင်္ဂလာဒုံ၊ ၀ါယာလက်မှာနေတာ ဆိုတော့ ကျုပ် တစ်လတစ်ခါရောက်ပါတယ်…လစဉ်ထောက်ပံ့နေကျငွေလေးလည်းသွားကန်တော့ရင်းပေါ့
အဲဒီကိုသွားတဲ့နေ့တော့ တက်စီမထွက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ ..ကျုပ်တက်စီနဲ့ မိသားစုသွားတာကိုး…
တစ်နေ့တော့…အဖေ ကျုပ်ကို အနားခေါ်ပြီး စကားပြောတယ်
`ငါ့သား အသက် အခုဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ´
`ဒီလိုပါသားရယ်…မင်းသာ ကားမောင်းစားမယ်ဆိုရင် မင်းတတ်ထားတဲ့ပညာတွေသင်ခဲ့စရာမှမလိုပဲကွ..နှမြောစရာ..´
`မဟုတ်သေးဘူးသား…အဖေတို့ မရှိမဲ့ရှိမဲ့နဲ့ သားကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းထားလာတာ
သားဘ၀ အဖေ့ထက်မြင့်အောင်..သားရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေ သားထက်မြင့်အောင်..
လောကကြီးမှာ..ငွေဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးသား…မင်းရဲ့ နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်သွေးလေးတွေကို အကောင်းဆုံးနမူနာပြပါကွာ…
မင်းမိသားစုကလည်း အစားအသောက်အနေအထိုင်ဆင်းရဲကောင်း ဆင်းရဲမယ်
ငါ့အဖေက အင်ဂျင်နီယာကွလို့ပဲ ဂုဏ်ယူချင်ကြမှာပါသားရယ်…´
ကျုပ်မိန်းမနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် ကျုပ်ကို မပြောရဲလို့ မပြောခဲ့ကြတဲ့စကား
ကျုပ်….ဒီအသက်အရွယ်ကြီးရောက်မှ…ခလေးတစ်ယောက်လို အဖေ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုတ်နမ်းပြီး မျက်ရည်ဝိုင်းနေတဲ့ကြားက…အဖေ့ကို ကတိပေးလိုက်ပါတယ်…`ကျနော်အလုပ်ပြန်လုပ်ပါမယ်အဖေ..စိတ်ချပါ..အဖေ မြင်ချင်သလိုကျနော့ ကိုမြင်ရပါစေ့မယ်´…လို့ ပြောအပီး…
အင်မတန်မှအလေးထားတဲ့ ကုမ်ပဏီ ဖြစ်နေလို့ တော်တော်စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်..
အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ကုမ်ပဏီရဲ့ အကျိုးအမြတ်ထက် ပိုအလေးထားတဲ့ ကုမ်ပဏီတွေလည်းပေါ်လာနေပြီဆိုတာပါပဲ…ဒါကြောင့်..
အခုလိုခေတ်ကြီးမှာ မိမိမှာသာ တကယ့်အရည်အချင်းရှိအောင် လုပ်ထားရင်
ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်နေအောင် အမြဲကြိုးစား သင်ယူလေ့ကျင့်နေသင့်ကြောင်း
ကွယ်လွန်သွားတာ တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ကျုပ်ကို လမ်းကြောင်း
မှန်ပေါ်ပြန်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်အဖေ့ကို လက်စုံမိုးကန်တော့ရင်း ကျန်နေသေးတဲ့
အဖေ့ချစ်သူ ကျုပ်ရဲ့ မိခင်ကြီးကိုလည်း အသက်ထက်ဆုံး ပြုစုစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး…..ကျုပ်လည်း ဂဇက်မှာ စာမရေးတာကြာ…ဘာရေးရမှန်းလည်းမသိ
နဲ့နေနေတုံး …စိတ်ကူး ပေါက်လို့ အဖေ့ နှစ်ပါတ်လည်နေ့ အလှူကအပြန် စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့
ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမဖြစ်ရင်လည်း စာဖတ်သူအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါဂျောင်း….
၆၊ ၁၊ ၂၀၁၄
ဒီစာတွေထဲမှာ ဒီနေရာလေးကို အခိုက်ဆုံး …
Crystalline ရေ အားပေးဖတ်ရှုတာကျေးဇူးပါ…ဟုတ်တယ်နော..ခုအချိန်က တက်စီတွေမှိုလိုပေါက်နေတာဆိုတော့ ရှာဖွေရတယ်မလွယ်ကြတော့ဘူး..
အလုပ်ဟူသမျှဂုဏ်ရှိစွ ဆိုပေမယ့်လည်း တင့်တောင့်တင့်တယ်အလုပ်လေးကျတော့လည်း ပိုဝင်ဆန့်စေတာပေါ့နော်.. ကြားထဲတက်စီမောင်းဖြစ်တာလည်း..အဲဒီအချိန်ကမို့ထင်တယ်.. အခုလိုချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ အဲလောက် ကားဆရာသက်ကြာမယ်မထင်ဘူး.. :))
အလုပ်သမား အခွင့်အရေးဆိုရင်တော့ အာရှအလုပ်ရှင်တွေက အတော်နှိမ်ပါတယ်…
သူတို့သိတာ သူတို့အတ္တနဲ့ ဥစ္စာဓနပါ ၊ မကျေနပ်ရင် ပြန်မေးခွင့်မရှိ တန်း ဖြုတ်ပါ၏…
ရှင်ကြီးဝမ်းလည်း ဝင်ဖူး ရှင်ငယ်ဝမ်းလည်းဝင်ဖူးပြီမို့…
အခု ကော်ပိုရေးရှင်းမှာပဲ အလုပ် လုပ်တာ ၁၀နှစ်လောက်ရှိပါပြီ…
အဲသည့်တော့ ပရိုက်ဗိတ်ဆိုရင်… တာ့တာ ပါခင်ဗျား…
အမှန်ပဲကိုကျောက်စ်ရေ…အဲထဲတော့ တရုပ်သူဋ္ဌေးတွေက အဆိုးဆုံးလို့ထင်မိတယ်…
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်.. ဦးမိုက်..။ ဒါနဲ့ သာမီးလေးလဲ အတော်ကြီးရောပေါ့… ပြန်လာဖြစ်ရင် သက်သက် လာတွေ့ ဂါဝရ ပြုပါဦးမြည်….။
ဘဝ ဆိုတာ ကို စေ့စေ့မတွေးတာကို ကြာပေါ့။
စည်းတွေ ဘောင်တွေလည်း ချမထားဘူးးးး
စည်းလွတ်ဘောင်လွတ်လည်း ဖြစ်မသွားဘူး ဆိုတဲ့ အခြေအနေနဲ့ပဲ ရှိနေတယ်။
ချိုးခဲ့တဲ့ ဘဝ တစ်ဆစ်တွေကတော့ အမှတ်တရ ပေါ့နော့။
လွန်ခဲ့တဲ့အပါတ်က ၀ါရှင်တန်သွားတော့..နှင်းတွေကျနေတာမို့.. မမောင်းချင်တာနဲ့.. တက်ခ်စီငှားစီးတာ.. မောင်းတဲ့သူက အာဖဂန်သားဗျ..
အီရန်၊ အီစတန်ဘူ၊ ဗန်ကူးဗား၊ ဆန်ဖရန် တက်ခ်စီလှည့်မောင်းလာတဲ့သူဆိုတာပဲ..
ပြောတာမှစုံနေတာပဲ..။ တက်ခ်စီသမားက.. အတွေ့အကြုံများသမို့… စာရေးလို့ကောင်းတယ်ထင်မိတယ်..
အခုလိုအချိန်များ ရန်ကုန်မှာ လာမောင်းကြည့်ပါအုံး..ကားတွေကနေရာတကာ ဂျမ်းဖြစ်နေတာ
ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ ပဲ ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ ကျိုးတော့တာပဲ
တက္ကစီမောင်းတာ နိမ့်ကျတဲ့အလုပ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်..
လူရော စိတ်ရော ပင်ပန်းတာပါ
အရင်တုန်းကတော့ အဲသည်ဝင်ငွေကလေးက မက်လောက်စရာမို့ ၏
ကိုမိုက် ဖြတ်ထွက်လာနိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်…….
အခုခေတ်တော့ တက္ကစီမောင်းတဲ့သူတွေ ပိုပင်ပန်းပြီး ၀င်ငွေလဲ နည်းသွားကြတယ်….။
ညနေအလုပ်သိမ်းလို့ ဆီဖိုးနှုတ်ပြီး ကိုယ့်အတွက်နှစ်သောင်း၊ နှစ်သောင်းခွဲလောက်ကျန်ရင်
လူရော စိတ်ရော ပင်ပန်းတာပါ..စိတ်ထဲ အော်ဒါရအောင်လည်း ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ကြည့်ရ
ဘ၀စုံတော့ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် အူးမိုက်ရေ။ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ အူးမိုက်က ဇနီးကောင်းရထားတာ အရွေးတော်တယ်နော်။ မိုက်ချက်
အားကျပါတယ် ဦးမိုက်ရေ။ ကံကောင်းလွန်းလှပါတယ်။
အခု ဒရိုင်ဘာလစာတွေ၊၀င်ငွေတွေကကောင်းနေတော့ ကျမ၀န်ထမ်းတွေထဲက အလုပ်ထွက်ခွင့်တောင်းပြီး ကားမောင်းနေတဲ့သူတွေ ရှိတယ်ဦးမိုက်ရဲ့၊
ကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာ သင်ပေးလိုက်တဲ့ ကလေးတွေပါပဲ။
ကိုယ်လည်း တတ်နိုင်သလောက် လစာတွေပေး၊(ခရိုနီမဟုတ်တော့ မက်လောက်အောင်တော့ မပေးနိုင်ပါဘူး) မိသားစုတွေကို စောင့်ရှောက်၊ပညာပေး သင်တန်းတွေလွှတ်တော့ လုပ်ပေးနေတာပဲ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘ၀ ရှေ့ရေးတွက် ၀င်ငွေကောင်းတာ ရွေးချင်တယ်ဆိုတာကို တားခွင့်မသာဘူး။
တခါတုံးက Eros ညည်းဖူးတဲ့ ဘွဲ့လည်းရ၊ကွန်ပျူတာတတ်တာ ဒရိုင်ဘာလောက်တောင် လစာမရလို့ စိတ်နာတယ် ဆိုတာ သတိရမိတယ်။
အဲဒီလို အမြင်တွေကနေ ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့ ဦးမိုက်ကို ချီးကျူးပါတယ်။
“အခု ဒရိုင်ဘာလစာတွေ၊၀င်ငွေတွေကကောင်းနေတော့ ကျမ၀န်ထမ်းတွေထဲက အလုပ်ထွက်ခွင့်တောင်းပြီး ကားမောင်းနေတဲ့သူတွေ ရှိတယ်ဦးမိုက်ရဲ့”
မှန်တော့မှန်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ပင်ပမ်းပိုခံရတယ်၊ နေ၀င်မိုးချုပ်ထိအောင်လည်းမောင်းရတယ်…
လူတွေကိုယ့်ကိုဆက်ဆံပြုမူတာ အများကြီးကွာသွားတယ်…အဲဒါလေးတွေတော့ စဉ်းစားစရာ
အကျိုးများတာပေါ့ အူးမိုက်ရယ်.. လူကြီးတွေရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေက လူငယ်တွေအတွက် အတုယူစရာ၊ သင်ခန်းစာယူစရာ၊ အားကျစရာတွေပါ..
လုံမ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အဖေ ကျတော့ သူလည်း ဝန်ထမ်းအလုပ်ကို စိတ်ကုန်ပြီး တက်စီမောင်းဖို့ စဉ်းစားသေးတယ်တဲ့.. ဒါပေမယ့် သားသမီးတွေကို တက်စီသမားသားသမီး အဖြစ်မခံနိုင်လို့ ပိုက်ဆံပိုရပေမယ့် မမောင်းခဲ့ဘူးတဲ့..
သူတို့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ “ငါတို့ အဖေက တက်ခ်စီ ဒရိုင်ဘာ” လို့တော့ဘယ်ပြောချင်မလည်းလေ..
ကိုယ့် အဖေတောင် အဲ့လိုမမြင်ချင်ရှာဘူး…
ကျွန်တော့်လည်း ကွန်ပျူတာခုံမှာထိုင် ဖုန်းSoftware တွေပြင်လိုက်၊ Video Editing တွေလုပ်လိုက်နဲ့ ပင်ပန်းနေတာတွေ့တော့ မိန်းမက သင်ထားတဲ့ Engineer ပညာရပ်တွေ အလကားဖြစ်ကုန်မှာ စိုးပြီး အလုပ်ပြန်ဝင်ခိုင်းခဲ့တယ်။ အ၇င် Company ထက်လစာ(၂)ဆကျော်လောက်ရတဲ့ company မှာထပ်ပြီး အလုပ်ရခဲ့တယ်လေ။ အမေကလည်းဝမ်းသာတာပေါ့။
ကျုပ်လည်း ခင်ဗျားအလုပ်သစ်ရပီဆိုတာကြားကတည်း ခင်များမိသားစုနဲ့အတူ
၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ…ဖုန်းSoftware တွေပြင်၊ Video Editing တွေလုပ်ဆိုတာတွေက
အားချိန်တွေမှာ အပျင်းပြေလုပ်ပေါ့ဗျာ…သမီးနဲ့ သားမက်ကလည်းအားကိုးနေရပီမဟုတ်လား…
“အ၇င် Company ထက်လစာ(၂)ဆကျော်လောက်ရတဲ့ company မှာထပ်ပြီး အလုပ်ရခဲ့တယ်လေ။ ”
တစ်ခါတစ်ခါကျ တွေးမိတယ်ဗျာ လစာပိုင်းမှာ အပေါင်းအသင်းတွေက ပိုပြီးတော့ ဝင်ငွေဖြောင့်လွန်းလို့
ကာယနဲ့ ဉာဏ ကွာတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့လို လုပ်လိုက်ချင်တာ အခါခါ။
အခုထိတော့ ဖြစ်ချင်စိတ်ကို အသိက ပြန်ဆွဲထားလို့ လမ်းမှန်နေဆဲလို့ ယူဆနေဆဲ….
အမှန်ပဲ ကိုမာဃရ.. ဉာဏ သမားကရေရှည်မှာသာသွားမှာပါဗျာ..စိတ်ရှည်ပါ…
ဦးလေးကိုကြီးမိုက်ရဲ့ စာတွေကသဘာဝထဲမှာနေရာကျလှတယ်ဗျာ ။
အတွေ့ကြုံတွေစုံတော့ စာတွေအရသာပိုရှိတယ်ထင်တာပဲ ။
ဘ၀အတွေ့အကြုံဆိုတာ မမေ့စကောင်းပါဘူး ဦးမိုက်ရေ……..
ကျနော့်မလဲ တပုံတပင်ရှိခဲ့ဖူးလေရဲ့ ….. ရေးဖြစ်မယ်တော့ မထင်ဘူး…..
လူမုန်များတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ၁၀နှစ်ကျော် လုပ်ခဲ့သကိုး
ဦး ကြီးမိုက်ဘ၀ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တွေကို… စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုလျက်ပါ….လို့ …